ထူးခြားဆန်းပြားလှတဲ့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ်ပြတိုက်အကြောင်း – CharTake
ထူးခြားဆန်းပြားလှတဲ့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ်ပြတိုက်အကြောင်း
chartake | October 28, 2020 | Knowledge News | No Comments
ထူးခြားဆန်းပြားလှတဲ့ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ် ပြတိုက်အကြောင်း
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံက ပြတိုက်တစ်ခုမှာ အမှောင်ကာလ လို့ခေါ်ကြတဲ့ တစ်ချိန်က အမှတ်တရတွေကို ဖော်ပြထားတဲ့ ပြတိုက်ကို ဖွင့်လှစ်ထားပြီး “Hex! Museum of Witch Hunt” လို့ အမည်ပေးထား ပါတယ်။
Ribe မြို့မှာ ပြသထားတာဖြစ်ပြီး ဒိန်းမတ်နဲ့ ဥရောပတစ်ဝန်း၁၆ နဲ့ ၁၇ ရာစု နှစ်များက ကြောက်လန့်ခဲ့ရတဲ့ အရာတွေကို စုစည်းပြ သ ထားတာပါ။ ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ စုန်းလိုလို မှော်လိုလို အဝတ်အစားတွေကို halloween အချိန်မှာ ကလေးတွေကအစ ဝတ်ဆင် နေကြတာပါ။ တစ်ချိန်ကတော့ ဒီလိုအရာတွေက တားမြစ်ခံရ လက်မခံခဲ့ကြတဲ့ ကြောက်စရာ အကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ထိ ဆိုးဝါးခဲ့သလဲဆိုရင် စုန်းအတတ်တွေနဲ့ နီးစပ်သူ ၁ သိန်းလောက် ဥရောပမှာ ရှိခဲ့ပြီး ၅ သောင်းလောက်က အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ ဖူးပါတယ်။ အစွပ်စွဲခံရသူ အများစုကတော့ အမျိုးသမီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများကတော့ မီးရှို့သတ် ခံခဲ့ရတာပါ။၀ တ္ထုတွေ ရုပ်ရှင်တွေ ထဲမှာပဲ ရှိတယ် ထင်ခဲ့ရတာတွေက အပြင်မှာလက်တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ပြတိုက်တာဝန်ခံ Hauberg Lindgaardက ရှင်းပြပါတယ်။
နောက်ထပ် ထူးခြားတာကတော့ ဒီပြတိုက်ရှိတဲ့အိမ်ဟာ ၁၆ ရာစုခေတ်က အဆောက်အအုံဖြစ်ပြီး ဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ ပက်သက်ခဲ့တဲ့ နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စုန်းလို့ယူဆပြီး နောက်ဆုံးသေဆုံးခဲ့ရသူက Anna Brudsဆိုသူဖြစ်ပြီး ၁၆၅၂ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Source ; AFP (MRTV)
Unicode … ဒိနျးမတျနိုငျငံမာရတဲ့ ထိတျလနျ့ဖှယျ ပွတိုကျအကွောငျး
ဒိနျးမတျနိုငျငံက ပွတိုကျတဈခုမာ အမာငျကာလ လို့ချေါကွတဲ့ တဈခြိနျက အမတျတရတှကေို ဖျောပွထားတဲ့ ပွတိုကျကို ဖှငျ့လဈထားပွီး “Hex! Museum of Witch Hunt” လို့ အမညျပေးထား ပါတယျ။
Ribe မွို့မာ ပွသထားတာဖွဈပွီး ဒိနျးမတျနဲ့ ဥရောပတဈဝနျး၁၆ နဲ့ ၁၇ ရာစု နဈမြားက ကွောကျလနျ့ခဲ့ရတဲ့ အရာတှကေို စုစညျးပွ သ ထားတာပါ။ ဒီဘကျခတျေမာတော့ စုနျးလိုလို မျာလိုလို အဝတျအစားတှကေို halloween အခြိနျမာ ကလေးတှကေအစ ဝတျဆငျ နကွေတာပါ။ တဈခြိနျကတော့ ဒီလိုအရာတှကေ တားမွဈခံရ လကျမခံခဲ့ကွတဲ့ ကွောကျစရာ အကွောငျးအရာတှေ ဖွဈပါတယျ။
ဘယျလောကျထိ ဆိုးဝါးခဲ့သလဲဆိုရငျ စုနျးအတတျတှနေဲ့ နီးစပျသူ ၁ သိနျးလောကျ ဥရောပမာ ရခဲ့ပွီး ၅ သောငျးလောကျက အသကျဆုံးရးခဲ့ရ ဖူးပါတယျ။ အစှပျစှဲခံရသူ အမြားစုကတော့ အမြိုးသမီးတှေ ဖွဈပါတယျ။ အတျောမြားမြားကတော့ မီးရသတျ ခံခဲ့ရတာပါ။၀တ်ထုတှေ ရုပျရငျတှေ ထဲမာပဲ ရတယျ ထငျခဲ့ရတာတှကေ အပွငျမာလကျတှရေ့ခဲ့ကွောငျး ပွတိုကျတာဝနျခံ Hauberg Lindgaardက ရငျးပွပါတယျ။
နောကျထပျ ထူးခွားတာကတော့ ဒီပွတိုကျရတဲ့အိမျဟာ ၁၆ ရာစုခတျေက အဆောကျအအုံဖွဈပွီး ဒီလိုကိစ်စတှနေဲ့ ပကျသကျခဲ့တဲ့ နရောလညျး ဖွဈပါတယျ။ စုနျးလို့ယူဆပွီး နောကျဆုံးသဆေုံးခဲ့ရသူက Anna Brudsဆိုသူဖွဈပွီး ၁၆၅၂ ခုနဈမာ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ Source ; AFP (MRTV)
ငိုခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းသဖြင့် ဂျပန်ကျောင်းများနှင့်ကုမ္ပဏီများက ငိုရန်အားပေးလာ
မေ့ကျန်နေခဲ့တဲ့ ရတနာပစ္စည်းများနှင့် ငွေကျပ်သိန်း၄၀ကျော်ကို ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူထံ ပြန်လည်ပေအပ်ခဲ့တဲ့ ဇနီးမောင်နှံ
ကမ္ဘာ့အရှားပါးဆုံး မျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ မပျံနိုင်တဲ့ ကြက်တူရွေး
ယူကရိန်းမှာရှိတဲ့ အချစ်ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်း Tunnel of Love